Ady mari-panondroana: Nahoana i Kremlin no milaza ho miaro ireo ‘mpiteny Rosiana’ ao Okraina? · Global Voices teny Malagasy
Tsy midika fa mahatsapatena ho Rosiana ianao raha miteny Rosiana
Voadika ny 06 Marsa 2022 4:32 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Italiano, русский, Español, Português, Français, Ελληνικά, Nederlands, українська, Română , Esperanto , English
Pikantsary tao amin'ny fantsona Youtube an'i Sergey Larin izay mivaky hoe ““великий и могучий русский язык” — na ny “teny rosiana lehibe sy mahery.”
Hevi-dehibe fototra iray amin'ny fitantaran'i Moskoa manodidina ny ady ataony ao Okraina ny voambolana hoe “русскоговорящие” na “русскоязычные” izay manondro ireo olona miteny Rosiana. Inona no dikan'io teny io ary nahoana izy io no atao fitaovana politika?
Raha miresaka fiteny, Rosiana, Okrainiana ary Belarosiana no antsoina hoe sampana Tatsinanana amin'ny fiteny Slavonika. Samy avy amin'ny fiteny Slavonika iraisana izy ireo, izay fiteny lehibe indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny Kyivan Rus, ny sivilizasiona tamin'ny taonjato faha-9 hatramin'ny taonjato faha-13 izay nisandratra tao Kyiv amin'izao fotoana ary niely avy tao ho any Okraina, Belarosia, sy ny faritra Eoropeana ao Rosia. Na dia eo aza ny fahasamihafan'izy ireo, mampiasa ny abidia Cyrillic ireo fiteny telo ireo ary mahatonga ny fifankahazoana tsy misy fandikan-teny. Mbola misaraka izy ireo ary samy manana literatiora sy toe-javatra miavaka.
Hatramin’ny niafaran'ny Fanjakana Tsarista Rosiana tamin’ny taona 1917, dia teo ambany fifehezan’ny Rosianina sy Poloney ny ankamaroan’ireo faritany izay nampiasaina ireo fiteny telo ireo. Nametraka ny teny Rosianina ho fitenin'ny fitantanan-draharaham-panjakana, ny tafika ary ny fanabeazana ny Rosia Tsarista, raha ny fiteny Okrainiana sy Belarosiana kosa no nampiasaina tao an-trano, teny an-dalambe, tany am-piangonana, ary tamin'ny fotoana sasany tany an-tsekoly. Tany amin'ny ankamaroan'ny faritra tamin'ny Fanjakana Tsarista, nahay fiteny roa ny olona ambony, satria nahazoana tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena ny miteny Rosiana.
Ny hevitra Sovietika momba ny “mpiteny Rosiana”
Rehefa nipoitra ny fanjakana Sovietika vaovao ary nanamafy ny andrim-panjakana tamin'ny taona 1920, nampihatra politika isan-karazany izy ary nanambara ny Rosiana ho fiteny tsy maintsy atao any amin'ny sekoly Sovietika rehetra izy nony farany, tamin'ny taona 1938.
Noheverina ho lasa fiteny manan-danja ny teny Rosiana, tamin'izany resaka izany ho an'ny vahoaka rehetra ao amin'ny vondrona sovietika amin'ny hoavin'ny Komonista iotôpiana ny teny Rosiana — fitenin'ny siansa, fandrosoana ary fandriampahalemana. Matetika ny teny rosiana no nofaritana tamin'ny fitenenana iray avy amin'ilay mpanoratra Rosiana tamin'ny taonjato faha-19 Ivan Turgenev ho “великий, могучий русский язык”, na ny “teny Rosiana lehibe sy tsy voatoha” .
Noho izany, dia nohamafisina indray ny politika Tsarista teo aloha ary nitarika ireo sangany tsy Rosiana maro handefa ny zanany any amin'ny sekoly Rosiana ihany, fa tsy sekoly manana fandaharam-pianarana amin'ny fiteny manjaka amin'ny iray amin'ireo Repoblika Sovietika 14 tsy Rosiana. Nohamafisina tao an-trano ny teny Rosiana, ary lasa fiteny voalohany amin'ny fahitalavitra. Vokatr'izany dia maro ireo Rosiana tsy ara-poko lasa mpiteny teratany ny teny Rosiana, manana ambaratongam-pahalalana isaknarazany amin'ny fiteniny (nolovaina). Matetika hita ho tsy mahasarika na tsy misy ilana azy ireny fiteny lova ireny. Ho an'ny zom-pirenena sasany, tsy azo natao tsotra izao fotsiny ny nianatra ny fiteny lova, satria tsy nisy sekoly, tsy nisy boky fianarana, ary tsy nisy mpampianatra nanamora ny fizotry ny fianarana ilay teny. Izany no nitranga tamin'ny Koreana, Jiosy (heverina ho ara-poko fa tsy vondrom-piarahamonina ara-pivavahana araka ny famaritana Sovietika ny zom-pirenena), ary ny Alemana.
Nanjary mariky ny raitra, ny fianarana ambony, ny asa tsaratsara kokoa, ny fitsinjovana ny asa, ny fari-piainana ambony kokoa ny teny hoe “mpiteny Rosiana” sy ny ampahany amin'ny hevitra Sovietika hoe “культурный человек” — na olona manana fianarana tsara sy mivoatra, fahaizana ambony afaka mahazo fahalalana noho ny fandikana amin'ny teny Rosiana.
Ny fianjeran'ny Ampira sy ny mari-pamantarana manjavozavo
Rehefa tsy nisy intsony ny Firaisana Sovietika tamin'ny faran'ny taona 1991, niditra tamin'ny dia iray mba hijery indray ny maha-izy azy ara-tantara, ara-kolontsaina ary ara-piteny izay nosivanina be loatra sy nahodikodin'ny foto-kevitra Sovietika, anisan'izany i Rosia ny repoblika Sovietika rehetra teo aloha .
Tsy maintsy nanao safidy tsy nampoizina ireo foko Rosiana izay matetika nomena tombontsoa ho mpitatitra ny fiteny Rosiana “lehibe sy mahery” any amin'ny Repoblika rehetra ivelan'ny Rosiana. Azon'izy ireo atao na ny mandray ny lahateny vaovao ara-kolontsaina amin'ny tanindrazany vaovao izay nahaverezan'ny Rosiana ny satany amin'ny maha teny ofisialy azy any amin'ny ankamaroan'ny toerana, ary mahita ny toerana ambonimbony kokoa raisin'ireo sangany vaovao eo an-toerana — matetika mpikambana ao amin'ny foko manjakazaka amin'ny fanjakana vaovao na velona indray vao haingana. Na afaka nifindra tany amin'ny Rosia vaovao izay noheverin'izy ireo fa tsy voatery hiaina izay heverin'izy ireo ho fahaverezan-tsata izy ireo.
Tamin'ity dingana ity, tonga nanoritsoritra vondrona roa samy hafa izay azo avahana amin'ny fototra ara-poko ny teny hoe mpiteny Rosiana. Ny vondrona voalohany dia manondro ny foko Rosiana, ary raha hitarina ny foko Slavy, saingy ahitana koa ny Jiosy, Alemana, Grika, ary izay vitsy an'isa ao amin'ny firenena fonenany vaovao.
Ny vondrona faharoa kosa dia ahitana olona avy amin'ny vondrona ara-poko manjakazaka, toy ny Azerbaijaney na Kyrgyz, izay miteny Rosiana ho tenin-drazany, indraindray ihany, ary matetika mandà ny fanondroana ny fanavaozana ara-pivavahana iainan'ireo hafa, ary hitan'ny maro ho toy ny vondrona misaraka.
Mazava ho azy fa manjavozavo ny sisintany eo amin'ireo vondrona rehetra ireo ary mety hiova mandritra ny fiainan'ny tsirairay.
Rosia poakaty manambara ny tenany ho mpiaro ireo mpiteny Rosiana rehetra
Ho an'i Rosia ankehitriny, ahitana olona eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 16 tapitrisa ny vondrom-piarahamonina miteny Rosianina monina any amin'ny fanjakan'i Estonia, Letonia, Litoania, Belarosia, Okraina, Moldavia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, ary Ozbekistan (Armenia, Georgia, sy Turkmenistan manana vondrom-piarahamonina kely kokoa ankehitriny izay mitonona ho mpiteny rosiana).
Stratejika ho an'i Rosia noho ny antony maro ity vondrona lehibe ity. Voalohany, firenena tsy misy na inona na inona i Rosia ahitana mponina tsy mitsaha-mihena noho ny fari-piainana ambany ho an'ny maro an'isa, ny taham-pahavelomana ambany, ary ny fifindra-monin’ireo manampahaizana marobe.
Faharoa, miantehitra amin'ireo mpiteny Rosiana mampiasa ny haino aman-jery novokarin'i Rosia amin'ny ankapobeny i Rosia mba haneho ny tombontsoany any amin'ny firenena maromaro ary hanao fandresen-dahatra eo an-toerana izay manome tombotsoa ara-barotra sy ara-politika Rosiana
Fahatelo, mampiasa ireo vondrom-piarahamonina ireo i Moskoa rehefa te-hanohitra ny governemanta ao an-toerana na any ivelany amin'ny alalan'ny fitaomana ny vitsy an'isa voalaza fa nesorina tamin'izy ireo ny zony ara-kolontsaina na fiteny. Matetika izany no atao mba hanoherana ny Vondrona Eoropeana amin'ny alàlan'ny vondrom-piarahamonina miteny Rosiana any amin'ny fanjakana Baltika. Natao ho fialan-tsiny hanohizana ny fanohana an'i Transnistria izany ary tamin'ny farany nampiasaina tamin'ny fanamarinana an'i Moskoa hibodo an'i Krimea, ampahany amin'ny faritr'i Luhansk sy Donetsk, ary vao haingana indrindra, ny Okraina manontolo.
Ankehitriny, manodikodina ny hevitra samihafa sy saro-takarina momba ireo mpiteny Rosiana i Moskoa handàvana ny mari-panondroana miavaka ananan-dry zareo: marobe, anisan'izany i Okraina izay miteny Rosiana ho tenin-drazany na miteny fiteny roa no tsy mihevitra ny tenany ho foko Rosiana ary azo antoka fa tsy miaraka amin'i Rosia. Na dia milaza aza i Moskoa fa tonga hiaro azy ireo.
Ny zava-misy dia rehefa midaroka baomba ny tanàn-dehibe tahaka an'i Kharkiv ao avaratr'i Okraina izy, dia midaroka baomba ny foko Rosiana sy ny mpiteny Rosiana ihany koa.
Tsidiho ny fitantarana manokana Rosia manafika an'i Okraina ijerenao ny torohay bebe kokoa momba ity lohahevitra ity.